မြန်မာမွတ်စ်လင်မ် စည်းလုံးခြင်း၏အင်အား: December 2008
Posted by Ordinary person at 12:36 AM No comments:
Posted by Ordinary person at 7:47 PM2comments:
်လိမ့်မည်။ သို့ပါ၍ အသင်တို့သူဘာပြောမလဲ အကဲခတ်ကြည့်ကြ၍ သေသေချာချာနားထောင်ကြလေကုန်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အသင်တို့အားလုံးအတွက်အရေးကြီး၍ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိပေးနိုင်၏။ ကျွန်ုပ်၏အွမ္မာတ်သားများ (နောက်လိုက်သားများ) အတွက်လည်းအကျိုးရှိလိမ့်မည်။ အတန်ကြာသောအခါဆွဟာဗာတစ်ယောက်ကတံခါးထဖွင့်ပေးလိုက်သည်။
ထို့နောက်ပုံပန်းသဏ္ဌာန် ထူးခြားလှသောယောက်ျားအိုတစ်ယောက် တစ်လှမ်းချင်း လှမ်းပြီးဝင်လာတာကိုမြင်လိုက်ကြပါသည်။ ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါကကြောက်ရွံ့ စရာကောင်းလှသည်။ ညာဘက်မျက်လုံးကန်းနေ၍ မေးစေ့တွင်မုတ်ဆိတ်ရှည် (၇)ပင်သည် မြင်းမြှီးပမာရှည်လျှားနေပါသည်။ ဘယ်ဘက်မျက်လုံးသည်ပြူး၍မျက်လုံးအိမ်အပြင်သို့ထွက်နေသည်။ ၎င်း၏ဦးခေါင်းသည်ဆင်ခေါင်းလောက်ကြီးပြီး သွားများမှာမူ ဝက်အစွယ်များပမာကားပြီး ထွက်နေသည်။ နှုတ်ခမ်းတို့သည်လည်း နွားထီး၏နှုတ်ခမ်းများပမာ ထူပြီး ဦးခေါင်းတွင်ဆံပင်မရှိပါ။
အီဗလီးစ် = အိုး မိုဟာမက် ချီးမွမ်းထောပနာပြုခြင်းအပေါင်းသည် သင်နှင့်မွတ်စ်လင်မ်အပေါင်းတို့အတွက်ဖြစ်ပါစေ။
ရစူလွလ္လာဟ် (ဆွ) = ချီးမွမ်းထောပနာပြုခြင်းအပေါင်းသည် အလ္လာဟ်အသျှင်မြတ်တစ်ပါးထဲအတွက်သာဖြစ်၏။ အို ကျိန်စာသင့်ထားသော အသင်အီဗလီးစ်...သင်၏လာခြင်းကို ကျွန်ုပ်သိပြီးဖြစ်၏။
အီဗလီးစ် = အိုး မိုဟာမက် စင်စစ်ကျုပ် သည်ကိုလာရခြင်းသည်ကျုပ်၏ဆန္ဒ
ကြောင့်မဟုတ်။ သင်ကျုပ်နှင့်အမေးအဖြေလုပ်ရန် အလ္လာဟ်အသျှင်မြတ်၏ အမိန့်တော်ကြောင့်လာရခြင်းဖြစ်၏။ အိုး မိုဟာမက် ယခုအချိန်တွင် သင်၏မေးခွန်းများကိုဖြေရန် ကျုပ်အစဉ်သင့်ရှိနေပြီ။
ရစူလွလ္လာဟ် (ဆွ) = အမိန့်တော်ကမည်သို့နည်း။ အသင့်တွင်မည်သို့သောတာဝန်ရှိသလဲဆိုတာရှင်းအောင်ပြောလော့။
ဆွဟာဗာအပေါင်းတို့မှာအံ့ဩနေကြလေသည်။ အီဗလီးစ် မည်သို့ဆက်ပြောမည်ကိုသိချင်နေကြသည်။ အီဗလီးစ်ကိုမြင်ရခြင်းသည်သူတို့အတွက်ပထမဦးဆုံးဖြစ်သည်။ ရစူလွလ္လာဟ် (ဆွ) နှင့်သာအတူမနေခဲ့ကြလျှင် ယခုလိုရုပ်ဆင်း
အင်္ဂါမျိုးနှင့် အီဗလီးစ်ကိုမြင်လျှင်အလွန်ပင်
အီဗလီးစ်မှ အမှန်ကိုဖြေကြားသွားသည်မှာ - စင်စစ်အလ္လာဟ်အသျှင်မြတ်ကမလာအေကာကောင်းကင်တမန် ကိုစေလွှတ်၍ သင့်ထံချက်ချင်းလာရန်မိန့်ကြားသောကြောင့် ကျုပ်မှာသင့်အားအရိုအသေပေးရခြင်းဖြစ်၏။ ကျုပ်၏လှည့်စားဖြားယောင်းမှူများကိုသင့်အားရှင်းပြရန် တာဝန်ပေးခြင်းခံခဲ့ရပါသည်။
ကျုပ်၏လက်ထောက်သားများ၊ အဖွဲ့သားများသည် လူသားများအား သာသနာ့လမ်းမှမျက်နှာလွှဲကြရန်၊ ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်သောလမ်းမှ လမ်းမှားသို့ရောက်ရန် သွေးဆောင်ဖြားယောင်း၏။ သို့မှသာလျှင် လူသားများသည် ဒွန္နယာ၊ အာခေရတ် နှစ်ဘဝ လုံးတွင်အရှက်ကွဲသူများဖြစ်ကြမည်။
ကျုပ်ဤကဲ့သို့လုပ်ရခြင်းမှာ လူသားများကိုမနာလိုခြင်း၊ အာဒမ်၏သားသ္မီးများကိုအခဲမကြေခြင်းတို့ကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။ လူသားများလမ်းမှားသို့ရောက်နေတာမြင်လျှင် ကျုပ်ဝမ်းသာ၏။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်အလ္လာ့ဟ်ထံတွင် အမှားများလုပ်နေကြလေသည်။ ၎င်းတို့ လမ်းမှားသို့ကျရောက်ရန်၊ အလ္လာဟ်အသျှင်မြတ်၏လမ်းစဉ်ကို ငြင်းပယ်ကြရန် ကျုပ်အစွမ်းကုန်ကြိုးစား၏။ သို့မှသာလျှင် ၎င်းတို့သည်ဂျဟန္နမ်ငရဲမီး၌ ကျုပ်၏အဖော်အဖြစ်အတူနေကြရန်ဖြစ်သည်။
သင်တို့၏အတိတ်မှလူသားများ၊ အသင်တို့သေဆုံးပြီး နောက်လာလတံ့သော လူသားများ မြောက်များစွာတို့သည် ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်သော သာသနာ၏သင်ကြားချက်များကိုပြစ်ပယ်၍၊ အလ္လာဟ်အသျှင်မြတ်ကိုယုံကြည်မှူမှငြင်းပယ်ကြသည်ကိုမြင်လျှင် သင်တို့သံသယဝင်စရာမလိုပေ။ ဤသည်ကျုပ်၏ဖြားယောင်းသွေးဆောင်မှူ၏ရလာဒ်ပင်ဖြစ်သည်။
အိုး မိုဟာမတ် ယခုအချိန်တွင် အသင်၏မေးခွန်းများကို တိကျမှန်ကန်စွာဖြေရန် ချုပ်ထိန်းခြင်းခံထားရ၏။ သင်မေးလိုရာကိုမေးလော့။
ရစူလွလ္လာဟ် (ဆွ) = ကောင်းပြီ။ အို့ အီဗလီးစ် မည်သို့သောသူကို အသင်အမုန်းဆုံးနှင့်မကျေနပ်ဆုံးဖြစ်သနည်း။
အီဗလီးစ် = အို့မိုဟာမတ် အသင့်အား ကျုပ်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းကိုပြောအံ့။ ကျုပ်မကျေနပ်ဆုံးနှင့်အမုန်းဆုံး သူသည်အသင်ပင်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်အသင်ကဲ့သို့ သစ္စာရှိ၍ အလ္လာ့ဟ်ထံ အေဗာဒါဟ်ပြုလုပ်နေကြသူများပင်ဖြစ်သည်။
ပထမအဆင့်က အလ္လာဟ်အသျှင်မြတ်အားကြောက်ရွံ့ရိုသေကြသော၊ အလ္လာဟ်အသျှင်မြတ်အတွက်၎င်းတို့၏ဘဝကို ဖြူစင်မှူများနှင့်ပေးဆပ်ကြသော မိန်းမပျို ယောက်ျားပျိုတို့ပင်ဖြစ်သည်။
ဒုတိယအဆင့်က ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲသတိထားနေကြသော၊ ဟန့်တားထားသော (ဟာရမ်) များမှ ကြိုးစားပြီးရှောင်ကြဉ်ကြသော၊ ဟာလာလ် (သို့) ဟာရမ် မှန်းမသေချာသောအရာများကိုသေချာသုံးသပ်စဉ်းစားကြသော အုလ်မာအ်များပင်တည်း။
တတိယအဆင့်က ဆင်းရဲဒုက္ခ၌သည်းခံပြီးနေ၍ ကိုယ့်ရဲ့မပြည့်စုံမှူနှင့်ဒုက္ခများကို သူများသိအောင်မပြောပြသောသူများပင်တည်း။
၎င်း၏ဒုက္ခများကိုသည်းခံနေ၍ သူများအားမပြောပြခြင်းသည် ၎င်းအတွက်သည်းခံခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုရမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍၎င်းသည် သည်းခံခြင်းကုန်ဆုံးသွားအံ့၊ ၎င်း၏ဒုက္ခများကို သူအများသိစေရန်အမျိုးမျိုးကြေငြာပြောပြနေမည်ဆိုလျှင်၎င်းသည်အပြစ်ငရဲပင်ရရှိလိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အလ္လာဟ်အသျှင်မြတ်သတ်မှတ်ထားသော (ကော့ဒေါ်နှင့်ကော့ဒယ်လ်) ကြောင့်ပင်တည်း။ ဤဒုက္ခများကိုသူများအား ပြောပြခြင်းအားဖြင့် ထိုဒုက္ခများသည် ၎င်းထံမှပပျောက်သွားမည်လည်းမဟုတ်ပေ။
ထို့နောက်ကျုပ်အမုန်းဆုံးသူများတွင် အလှူအတန်းများပေးလေ့ရှိသော လူချမ်းသာများနှင့် ရိုးသားစွာရှာဖွေစားသောက်ပြီး ရိုးသားစွာသုံးစွဲကြသောသူများပါဝင်သည်။ အကယ်၍၎င်းတို့သည် မရိုးသားသောနည်းများနှင့်ရှာဖွေသုံးစွဲကြသည်ကိုမြင်လျှင် ကျုပ်ဝမ်းသာကျေနပ်မိ၏။ ထို့ကြောင့်ကျုပ်ဘက်မှကြိုးစား၍ လူသားများအား လောဘရမ္မက်တက်လျက်၊ မမှန်ကန်သောနည်းများနှင့်ရှာဖွေစားသောက်ကြရန်၊ ဟာရမ်နည်းနှင့်ရှာဖွေကြရန်၎င်းတို့အားတီးတိုးပြောလေ့ရှိသည်။ သို့မှသာလျှင်၎င်း၏မသန့်ရှင်းသောနည်းဖြင့်ရှာဖွေလာသောပစ္စည်းဥစ္စာများကြောင့် ၎င်း၏မိသားစုမှာ ၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရှိသောသူများကဲ့သို့ ဒုက္ခဆင်းရဲထဲသို့ကျရောက်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုယ်တိုင်လည်း အရှက်ကွဲသူဖြစ်မည်။
ရစူလွလ္လာဟ် (ဆွ) = ကျွန်ုပ်၏နောက်လိုက်များ အလ္လာဟ်အသျှင်မြတ်ကိုသတိရရန် ထပြီးနမာ့ဇ်ဖတ်ကြတာမြင်လျှင် အသင်မည်သို့ခံစားရပါသနည်း။
အီဗလီးစ် = အသင်၏နောက်လိုက်များထ၍နမာ့ဇ်ဖတ်တာမြင်လျှင် ကျုပ်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းအားလုံးသည်မရေရီယား ငှက်ဖျား ဖျားနေသလို တုန်လှုပ်နေသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းသည် ၎င်းတို့ အလ္လာဟ်အသျှင်မြတ်ကိုစဂျီဒါဟ်ဦးချနေကြသည်ကိုကျုပ်သိသောကြောင့်ပင်တည်း။ ၎င်းတို့အား ဒွန္နယာနှင့်အာခေရတ်နှစ်ဘဝလုံးအတွက် အလ္လာဟ်အသျှင်မြတ်၏ ချီးမြှင့်ခြင်းကိုခံရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့နမာ့ဇ် ၅ ကြိမ်ကိုပြစ်ပယ်သည်ကိုမြင်ရလျှင် ကျုပ်အလွန်တရာမှဝမ်းသာပီတိဖြစ်မိသည်။ ၎င်းတို့သည် ကျုပ်နှင့်အတူ ငရဲမီးတွင်နေထိုင်ရမည့်မိတ်ဆွေများဖြစ်သည်။
ရစူလွလ္လာဟ် (ဆွ) = ကျွန်ုပ်၏နောက်လိုက်များဥပုသ်စောင့်ထိန်းကြတာမြင်လျှင် အသင်မည်သို့ခံစားရပါသနည်း။
အီဗလီးစ် = ကျုပ်၎င်းတို့အားနှောင့်ယှက်လို့မရပါ။ ကျုပ်၏ခြေလက်များကို ဝါဖြေချိန်အထိကြိုးနှင့်ချည်
ရစူလွလ္လာဟ် (ဆွ) = ထို့နောက်ကျွန်ုပ်၏နောက်လိုက်သားများ ဟာ့ဂ်ျသွားသည်ကိုမြင်လျှင် အသင်မည်သို့ခံစားရပါသနည်း။
အီဗလီးစ် = ကျုပ်၏စိတ်သည် တည်ငြိမ်မှူမရှိ။ တစ်ချိန်လုံးပူပင်သောကသို့ရောက်၍အရူးတစ်ယောက်ပမာဖြစ်နေပါသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်း၏ နီယတ်အတိုင်းဟာ့ဂ်ျမသွားနိုင်ရန် တာဝန်မယူတတ်သောသူများမှတဆင့် အစွမ်းကုန်လှည့်စားဖြားယောင်း၏။
ရစူလွလ္လာဟ် (ဆွ) = ၎င်းတို့ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ကိုဖတ်ရှူလျှင်ကော အသင်မည်သို့ဖြစ်သနည်း။
အီဗလီးစ် = အိုး.....ကျုပ်ဒုက္ခဆင်းရဲမှာတွေ့လေ၏။ ကျုပ်၏ခန္ဓာကိုယ်သည် သံရည်ပူနှင့်လောင်းချသကဲ့သို့ ပူလောင်နေ၏။ ထို့ကြောင့်လူသားများအားအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ လှည့်စားဖြားယောင်း၏။ ၎င်းတို့ကုရ်အာန်ဖတ်ခြင်းမှရပ်တန့်ရန် ၎င်းတို့၏မျက်လုံးများ အိပ်ငိုက်အောင်မှုတ်သွင်း၏။
ရစူလွလ္လာဟ် (ဆွ) = ကျွန်ုပ်၏နောက်လိုက်များ အလှူအတန်းများလုပ်ကြသည်ကို အသင်မည်သို့ခံစားရပါသနည်း။
အီဗလီးစ် = ထိုအရာသည်ကျုပ်၏ခန္ဓာကိုယ်အားလွှနှင့် အပိုင်းပိုင်းဖြတ်တောက်သကဲ့သို့ ကျုပ်၏စိတ်ကိုနာကြည်းမှူများဖြစ်စေသည်။
ရစူလွလ္လာဟ် (ဆွ) = အဘယ်ကြောင့်ဤသို့ဖြစ်ရပါနည်း။ ဤသည်၎င်းတို့ အလှူအတန်းပေးခြင်းသာဖြစ်သည်။
အီဗလီးစ် = အီဗလီးစ်ဖြစ်သောကြောင့် အသင်၏နောက်လိုက်များ အလှူအတန်းပေး၍ကုသိုလ်ကောင်းများရကြသည်ကို ကျုပ်အလွန်တရာမှမကျေနပ်ဖြစ်ရသည်။ အလှူအတန်းပေးခြင်းသည်၎င်းတို့အတွက်ကုသိုလ်ကောင်းများ မြောက်များစွာရမည်ကိုကျုပ်ကောင်းစွာသိ၏။
၁။ ၎င်းတို့၏ပစ္စည်းဥစ္စာများကို အလ္လာ့ဟ်ထံမှကောင်းကျိုးများပေးမည်။
ရစူလွလ္လာဟ် (ဆွ) = ကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေကြီးလေးယောက်နှင့်ပတ်သက်၍ အသင်မည်သို့ခံစားရပါနည်း။
အီဗလီးစ် = အသင်သိထားလော့။
အဘူဗါက်သည် အစ္စလာမ်ခေတ်မတိုင်ခင်ကကော အစ္စလာမ်သို့၎င်းဝင်ပြီးသောအချိန်မှာပါ ကျုပ်ကိုမည်သည့်အချိန်မှဦးမချခဲ့ပါ။
အာဖ်ဖာန်၏သားအုစ်မာန်ကို ကျုပ်အားနာမိ၏။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မလာအိကာသည်ပင် ၎င်းအားရှက်ကြသည်ကိုကျုပ်သိ၍ပင်တည်း။
အသင်၏မိတ်ဆွေ အဘူဒေါ့လိဗ်၏သား အလီကိုတော့ ကျုပ်ကြောက်ရွံ့မိ၏။ ထို့ကြောင့် ကျုပ်၎င်းအားမသိ။ ၎င်းအလီသည်လည်းကျုပ်အားမသိဟုမျှော်လင့်ပါ၏။
ရစူလွလ္လာဟ် (ဆွ) = ထိုသို့ဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်၏နောက်လိုက်များအား ထူးခြားမှူများပေးထားသောကြောင့်၎င်း၊ အီဗလီးစ်အား (ကျိန်စာသင့်ပါစေသား) နာကျင်စေအောင်လုပ်နိုင်သောကြောင့်၎င်း အလ္လာ့ဟ်ထံတွင်ကျွန်ုပ်ရှကူရ်လုပ်ပါသည်။
အီဗလီးစ် = ဟား.......အိုးမိုဟာမတ် အသင်ထင်တာမှားနေပြီ။ ကျုပ်အသက်ရှင်နေသမျှကာလပတ်လုံး၊ အရည်အချင်းရှိသမျှထုတ်၍ လူသားများကိုဖြားယောင်းရာတွင်အသုံးချမည်။ သင်၏နောက်လိုက်များအား နေ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ညပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မည်သူပဲဖြစ်စေ၊ မည်သို့သောနေရာမှာပဲနေနေ၊ လူကြီးလူကောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရိုးရိုးလူသားပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပညာတတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ထုံအသောသူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လူချမ်းသာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လူဆင်းရဲပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လူအိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လူငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အပျို လူပျိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အိမ်ထောင်ရှိသူတွေပဲဖြစ်ဖြစ် အခွင့်အရေးရတိုင်း ကျုပ်လှည့်စားဖြားယောင်းသွေးဆောင်မည်ဖြစ်သည်။ ကျုပ်၏အခွင့်အရေးများကိုတန်ဖိုးမရှိလက်လွှတ်မည်မဟုတ်ပေ။
အီဗလီးစ် = ကျုပ်အတွက်အခွင့်အရေးမြောက်များစွာရှိ၏။ လူသားတို့၏သွေးကြောထဲသို့လည်းကောင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့လည်းကောင်း၊ အသွေးအသားများထဲသို့ လည်းကောင်း၊ ကျောရိုးထဲသို့ လည်းကောင်း ကျုပ်ဝင်နေလို့ရ၏။ ဤသို့အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ရပါနည်းဆိုလျှင်၊ လူသားများ၏ ခန္ဓာကိုယ်သည် ထူ၍၊ ကျုပ်၏ခန္ဓာကိုယ်သည် ပျော့ညံ့ပေါ့ပါးသောကြောင့်ပင်တည်း။
အီဗလီးစ် = အိုး.....မိုဟာမတ် အသျှင်မြတ်က ကျုပ်အားကမ္ဘာဆုံးထိတိုင်အသက်ရှင်သန်ခွင့်ပေးထား၏။ ထို့ကြောင့်ကျုပ်သည်လူအုပ်စုတိုင်း၊ လူမျိုးတိုင်းကိုအစွမ်းကုန် လှည့်စားဖြားယောင်းသွားမည်။
အီဗလီးစ်= ရာထူးရာခံရှိလူများ၊ ဘုရင်များ၊ ခေါင်းဆောင်များအား မာန်မာနတက်စေရန်လည်းကောင်း၊ ၎င်းတို့အားအောက်တန်းကျစေ၍ လူအများသေကြေပျက်စီးစေသော စစ်ပွဲများဖြစ်စေရန် လည်းကောင်း၊ ၎င်းတို့၏စိတ်ကို ကျုပ်သွေးဆောင်မည်။ ပညာတတ်များကို ပကာသနတွင်နစ်မွန်းစေမည်။ ထို့နောက် ၎င်းအားဘုရင်နှင့်ခေါင်းဆောင်တို့၏နှစ်သက်မှူကိုရစေမည်။ နောက်ဆုံးတွင်၎င်းအား မာန်မာနများနှင့်အကုသိုလ်စက်ဝိုင်းထဲသို့ရောက်အောင်အထိကျုပ် လှည့်စားဖြားယောင်းမည်။
အီဗလီးစ် = ချမ်းသာကြွယ်ဝသော သူများအား ၎င်းတို့၏ဥစ္စာပစ္စည်းများအပေါ်တပ်မက်စွဲလမ်းမှူဖြစ်စေမည်။ မရှိဆင်းရဲသူတို့အပေါ်စေးနဲစေမည်။ ထိုမှသာလျှင် ၎င်းအပေါ်ဆင်းရဲသူတို့၏ အမျက်သက်ရောက်မည်။
အီဗလီးစ် = လူအ လူထုံ နှင့်ဆင်းရဲသားများအား သည်းခံခြင်းတရားကုန်ဆုံးရန် သွေးဆောင်မည်။ သို့မှပါလျှင် ၎င်းတို့သည်ဆင်းရဲမှူကြောင့် ယုံကြည်မှူကိုငြင်းပယ်၍အကုသိုလ်ထဲ
သို့ရောက်ကြမည်။ ဟန့်တားထားသော ဟာရမ်များပြုလုပ်ကြမည်။ ခါးပိုက်နှိုက်ပြေးခြင်း၊ ခိုးဝှက်ခြင်းနှင့်အခြားသောဒုစရိုက် များလုပ်ကြမည်။ ဤသည်များကိုမြင်လျှင် ကျုပ်ဝမ်းသာအားရ ရယ်၍ကျေနပ်နေမည်။
အိုးမိုဟာမတ် သင်သိပါ၏လော ကျုပ်တွင်လက်ရုံးပေါင်း ၇၀ ၀၀၀ ရှိ၏။ လက်ရုံးတစ်ကောင်လျှင် ရှိုင်တွာန်နောက်လိုက် ၇၀ ၀၀၀ ဆီရှိ၏။ ကျုပ်၏လက်ထောက်များကို အပျို လူပျိုများအား ဖြားယောင်းသွေးဆောင်ရန် ကျုပ်အမိန့်ပေး၏။ မိန်းမပျို ယောက်ျားပျိုတို့အား သာသနာ၏ သင်ကြားချက်များကို စွန့်လွှတ်စေ၏။ ၎င်းတို့အားလွတ်လပ်စွာတွေ့ဆုံစေ၍ရင်းနှီးစေ၏။ ထို့နောက် နိကာဟ် ထိမ်းမြားမင်္ဂလာဆောင်ချင်းမရှိပဲနှင့်ကာမ ကျူးလွန်စေ၏။ ထိုမှတစ်ဆင့် မိန်းကလေးများ သန္ဓေတည်သောအခါကြီးမားသောအပြစ်ဖြစ်သော ကိုယ်ဝန်ကို ဂိုန္န္နာ ထိုက်မှန်းမသိရအောင်ဖြားယောင်း၍ဖျက်ချစေ၏။ ၎င်းတို့သောင်ဝ်ဘာ မလုပ်ပဲသေဆုံးကြသောအခါဝယ်၊ ကျုပ်၏မိတ်ဆွေအဖြစ်အပယ်ငရဲတွင် အတူနေကြရမည်သာဖြစ်သည်။
ိုအိုးမိုဟာမတ် ကျုပ်၏လက်ထောက်များကိုနံနက် ဖဂျလ်ထဖတ်မည့်သူများဆီသို့စေလွှတ်၍ ၎င်းတို့အိပ်ယာမှမထနိုင်ရန် ရင်ဘတ်ကို လေးနေအောင်ဖိထားခိုင်း၏။ ထို့နောက်၎င်းတို့နမာ့ဇ်ထမဖတ်နိုင်ရန် ဆက်အိပ်ပျော်သွားရန်မျက်လုံးများကိုမှုတ်စေ၏။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်အချိန်ကြာအိပ်ပျော်သွား၍ ဖဂျလ်နမာ့ဇ်ကို နောက်ကျမှဖတ်ရ၏။
စိတ်ဓါတ်ပျော့ညံ့သောသူ၊ အီမာန်အားနည်းသောသူများကို လောင်းကစားကိုနှစ်သက်ကြရန် ကျုပ်ဖြားယောင်းသွေးဆောင်၏။ လောင်းကစားကိုနှစ်သက်ခြင်းကြောင့်စွဲမက်လေ၏။ တစ်ခါတစ်ရံ အလောင်းအစားနိုင်ခဲ့သော်လည်း ၎င်း၏ဘဝကိုပျော်ရွှင်မှူမပေးနိုင်ချေ။ ၎င်းတို့၏စွဲမက်ခြင်းကြောင့် လောင်းကစားမှ နှုတ်ထွက်ရန်လည်း မလွယ်တော့ပေ။ ၎င်းသည်နမာ့ဇ်ကိုကြိုးစားဖတ်၍ရိုဇာစောင့်ထိန်းနေသော်လည်း ထိုအရာများကိုလက်ခံမည်မဟုတ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လောင်းကစားများကြောင့် ၎င်းသည်အပြစ် ဂိုနာလ်များနှင့်ပေကျံနေလိမ့်မည်။
နမာ့ဇ်ဖတ်ခြင်းကိုနှစ်သက်ကြသော သင်၏နောက်လိုက်သားများအားနည်း မျိုးစုံနှင့်လှည့်စားဖြားယောင်း သွေးဆောင်မည်။ အာဇာန်အသံကြားရသောအခါ ကျုပ်နားကိုပိတ်၍အဝေးဆုံးသို့ထွက်ပြေး၏။ ဤသို့လုပ်ရခြင်းသည် အာဇာန်အသံကိုကြောက်၍မဟုတ်၊ မုန်း၍လည်းမဟုတ်။ သို့သော်မကြားချင်၍ပင်ဖြစ်သည်။ အာဇာန်ကြွေးကြော်သံပြီးသောအခါ ဆက်လက်ပြီးလှည့်စားဖြားယောင်းရန်၎င်းတို့ထံကျုပ်ပြန်လာ၏။
၎င်းတို့မတ်မတ်ရပ်၍လက်ပိုက်နေချိန်တွင် တစ်ခြားသောအရာများကိုသတိရရန်၊ နမာ့ဇ်ဘယ်နှစ်ရကတ်ဖတ်နေမှန်းမသိမေ့သွားကြရန်၊ စူရဟ်များမေ့သွားရန် ၎င်းတို့၏နားတွင် တီးတိုးပြော၍ နှောင့်ယှက်၏။ တစ်စက္ကန့်လောက်မျှသာအခွင့်အရေးရသော်လည်းကျုပ်နှောင့်ယှက်မည်သာဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ၎င်းတို့အား နမာ့ဇ်ဖတ်နေချိန်တွင် အိပ်ချင်ရန်၊ သန်းနေကြရန် လုပ်ထား၏။
အိုးမိုဟာမတ် အသင်သိထားလော့။ ကျုပ်နှင့်ပေါင်းသင်းနေကြသောလူအများစုရှိသေး၏။
၁၊ အမှားများကိုနှစ်သက်စွာ ကျူးလွန်သောလူများသည်
၂၊ အရက်သောက်ပြီးမူးယစ်နေကြသူများသည် ကျုပ်နှင့်အတူအိပ်နေသူများပင်တည်း။
၃၊ ခိုးသားများ၊ လူလိမ်များသည် ကျုပ်၏ဂုဏ်ရှိဧည့်သည်များပင်တည်း။
၄၊ နမာ့ဇ်ကိုပြစ်ပယ်သောသူများသည် ကျုပ်၏ချစ်သူငယ်ချင်း များပင်တည်း။
၅၊ မိန်းမကို အနိုင်ယူရန်ကွာရှင်းကြသောသူများသည် ကျုပ်၏ မျက်စိအစာပင်တည်း။
ဤသည်ရဆူလွလ္လာ (ဆွ) ၏ရှေ့တွင် အီဗလီးစ် ၏ဝန်ခံချက်တစ်ချို့သာဖြစ်သည်။
ဤဟဒီးဆ်ကိုဖတ်ရှူခြင်းဖြင့် မွတ်စလင်မ် မောင်နှမများရှိုင်တွာန်၏ လှည့်စားဖြားယောင်းသွေးဆောင် နှောင့်ယှက်မှူများကိုအထူးသတိပြုကြပါရန်.......
ရဗ်ဗေ့၊ အအူးသို့၊ ဗေ့က၊ မင်န် ဟ-မ-ဇာတစ်ရှ်၊ ရှယာတွီးနေ့၊
ဝ-အအူးသို့၊ ဗေ့က၊ ရဗ်ဗေ့၊ အန်-ယ်-ယဟ်သွို့ရူးန်။
ကုအာန် (၂၃ : ၉၇)
အဓိပ္ပါယ်။ အိုး မွေးမြူတော်မူသောအလ္လာဟ်အသျှင်။ ရှိုင်တွာန်၊ နတ်မိစ္ဆာကောင် များ၏ သွေးဆောင်ဖြားယောင်း နှောင့်ယှက်မှူမှကင်းဝေးရန် အလ္လာဟ်အသျှင်မြတ်ထံ ခိုလှုံပါ၏။ ထို့ပြင် အို မွေးမြူတော်မူသောအသျှင်၊ ကျွန်တော်မျိုး/ကျွန်တော်မျိုးမ အပါးသို့သူတို့လာရောက်မချဉ်းကပ်
ရန် အလ္လာဟ်အသျှင်ထံ ခိုလှုံပါ၏။
မူရင်းကိုဟဒီးဆ်တော် တီရ်မေဇီကျမ်း နှင့် ဘုခါရီကျမ်းတွင်ဖတ်ရှူနိုင်ပါသည်။
Can be read in ref:Ibn Isaq, Sirat Rasul Allah. Translated by Alfred Guilaume, Oxford University Press,1955, page 221 or Surah AlKahf and the Modern Age by Dr Imran N Hosein page 26.
Posted by Ordinary person at 12:10 AM No comments:
၁။ အိဇာဂျာအ နဆ်ွရုလ်လားဟိ ဝလ်ဖသ်ဟ်
၂။ ဝရအိုင်းသန်းန် နားစ ယဒ်ခုလုးန
ဖီ ဒီးနိလ်လားဟိ အဖ်ဝါးဂျာ
၃။ ဖစဗ်ဗိဟ် ဗိဟမ်းမ်ဒိ ရဗ်ဗိက ဝပ်စ်သဃ်ဖိရ်ဟ်
အင်းန်နဟူ ကားန သောင်ဝ်ဝါးဗာ
၁။ အလ္လာဟ်အသျှင်မြတ်၏ ကူညီစောင်မခြင်းသည်လည်းကောင်း၊ အောင်နိုင်မှူသည်လည်းကောင်း၊ ရောက်ရှိလာသောအခါ။
၂။ ၎င်းအပြင် လူတို့အားအလ္လာဟ်အသျှင်မြတ်၏ သာသနာ လမ်းစဉ်တွင်းသို့ အစုလိုက်၊ အသင်းလိုက် ဝင်ရောက်လာသည်ကို အသင်တွေ့မြင်ရသောအခါ။
၃။ အသင့်ကို အဆင့်ဆင့်ပြုစုပျိုးထောင်တော်မူသော အသျှင်မြတ်သည် အတိုင်းအဆမရှိ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်တော်မူကြောင်း ချီးမွန်းခြင်းနှင့်တကွ ကျူးရင့်လော့။ ထိုအသျှင်မြတ်ထံမှ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် တောင်းခံလော့။ မုချဧကန် ထိုအသျှင်မြတ်သည် နောင်တဖြင့် ပြန်လှည့်ခြင်းကို လက်ခံတော်မူသောအသျှင် (ဝါ) ကရုဏာဘက်သို့ များစွာလှည့်တော်မူသောအသျှင် ဖြစ်တော်မူသည်။
Posted by Ordinary person at 3:29 AM No comments:
Posted by Ordinary person at 7:53 PM No comments:
Posted by Ordinary person at 11:33 PM 1 comment:
Posted by Ordinary person at 3:35 PM2comments:
အစ္စလာမ့်ရောင်ခြည်ဘလော့ဂ်ကို အောက်ပါ ကုရ်အာန်အာယတ်တော်နှင့်ဒိုအာတို့ဖြင့် စဖွင့်လိုက်ပါသည်။
(ဝလ္လာဟို့၊ ယဟ်ဒီး၊ မန်းယရှာအို့၊ အေလာ၊ ဆွေရာတွီး(မ်)၊ မွတ်စ်တကီမ်း)
ဧကန်အမှန် အလ္လာဟ်အသျှင်မြတ်သည် မိမိနှစ်မြို့တော်မူသော သူတို့ကို ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်သော တရားလမ်းသို့ညွှန်ကြားပြသပို့ဆောင်တော်မူလေသတည်း။ ကုရ်အာန် (၂ : ၂၁၃)
(ဟတ်စ်ဗေ့၊ ယောက်လ္လာဟို့၊ လာ အေလာဟ၊ အင်လ္လာဟူ၊ အလိုင်းဟေ့၊ တဝပ် ကလ်တို့၊ ဝဟို့ဝ၊ ရဗ်ဗွလ်၊ အရ်ရှင်လ်၊ အသွီးမ်။)
အဓိပ္ပါယ်။ အလ္လာဟ်အသျှင်မြတ်သည် ကျွန်ုပ်၏အဖို့လုံလောက်ပြီ။ ထိုအသျှင်မြတ်မှတပါး ခဝပ် ကိုးကွယ်ခြင်းကိုခံထိုက်သောအသျှင်မရှိ။ ထိုအသျှင်သည်သာလျှင် ခဝပ် ကိုးကွယ်ခြင်းကိုခံထိုက်တော်မူ၏။ ကျွန်တော်မျိုး/ကျွန်တော်မျိုးမ ၏ အလုပ်ကိစ္စခပ်သိမ်းကိုလည်း ထိုအသျှင်အပေါ်၌သာ ကိုးစားအားထား စုပုံအပ်နှင်းပါ၏။ ထိုအသျှင်မြတ်သည်အလွန်ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော (အရ်ရှ်) ပလ္လင်တော်ကိုစိုးပိုင်တော်မူသော အသျှင်ဖြစ်လေသည်။
အကျိုးအာနိသင်။ ရစူလွလ္လာဟ် (ဆွ) ဟောကြားသော တရားများကို မိစ္ဆာာဒိဋ္ဌိများကသရော် ပျက်ချော်ပြုကြသောအခါ အလ္လာဟ်အသျှင်မြတ်က ဤမုက္ခပါဌ်တော်ကို ချပေးထုတ်ပြန်တော်မူပြီး၊ (အကယ်၍ ထိုသူတို့သည် သင်ဟောပြောသည်များကို မျက်နှာလွှဲရိုင်း ကျောခိုင်းကြပါလျှင် အသင်ဟောပြောလော့) ဟူ၍ ဤအာယတ်တော်ကို သင်ပြတော်မူလေသည်။
Posted by Ordinary person at 12:20 AM No comments:
Labels: Aphwint sar